Mpampianatra mpitsara CEPE « Omeo ny vacation’nay fa aza odiana fanina »
Parution du Mardi, 7 Décembre 2021
Mangataka ny tokony handoavana ny vacation-ny na ny tambin-karama amin’ny fitsarana fanadinana, ireo mpampianatra mitsara ny fanadinam-panjakana CEPE.
Raha tsiahivina mantsy dia efa nanomboka afak’omaly hariva izany, nitohy omaly tontolo andro. Notsiahivin’ireo mpampianatra fa tambin-karama na vacation tamin’ny taona 2018 no noraisin’izy ireo hatreto. Mbola tsy voaloha araka izany ny tambin-karama tamin’ny taona 2019, 2020 ary ny 2021 izay hangatahin’izy ireo ny handoavana azy mitambatra. Aza odiana fanina izahay mpampianatra hoy izy ireo fa izahay no tena miasa mafy. Mahatsapa mantsy izy ireo fa hataon’ny Fitondram-panjakana ankilabao hatrany amin’ireo fangatahana hataony nefa tena hiankinan’ny ain’ny asa fampianarana. Tsy mbola nahazoana valiny mifandraika amin’izao fangatahana hataon’ireo mpampianatra mitsara ny fanadinana CEPE izao moa ny teo anivon’ny Ministera tompon’andraikitra raha efa nilaza kosa izy ireo fa tsy maintsy hanao fanambarana.
Ankatso I sy II Hahazaka mpianatra 300 ireo trano vaovao
Tonga nijery ny fivoaran’ny asa fananganana toeram-ponenan’ny mpianatra, izay misy fotodrafitrasa 3 lehibe eny Ankatso ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Pr Assoumacou Elia Béatrice niaraka
Prof Jonah Ratsimbazafy “Mba henoy ihany ny mpikaroka”
« Ny Filoha Paul Kagame tena mihaino ireo siantifika ao aminy eo amin’ny fitantanana ny fireneny... Vao nanomboka mihitsy ny coronavirus dia anisan'ny nanakatona haingana ny fizahantany tany Rwanda ny Filoha Kagame.